Xog rasmi ah: Kolonyo ka tirsan milateriga Taliyaaniga oo lagu dhex arkay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
31st January 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Kolonyo milateri oo ka tirsan ciidamada dalka Taliyaaniga ayaa shalay lagu arkay iyagoo maraya qaar ka mid ah waddooyinka Muqdisho, sida ay Mareeg Media ogaatay.
Wariyaha Mareeg Media Muqdisho, ayaa arkay 4 ka mid ah gaadiidka dagaalka ciidamada Taliyaaniga oo maraya isgoyska Sanaca ee magaalada Muqdisho, iyagoo ka yimid dhanka Ex-kontorool Balcad, kuna sii jeeday dhanka wada Beexaani.
Afarta gaadiidka oo ah nuuca gaashaaman ayaa waxaa ku sawirnaa calanka dalka Taliyaaniga. Sidoo kale, calanka dalkaas ayaaba ka dul babanayey gaadiidka.
Afarta gaari waxaa dhamaantood saarnaa ciidamo cadaan ah oo hubeysan, hase ahaatee Mareeg Media ma xaqiijin karta howsha ay hayeen, iyagoo marayey deegaan aad uga fog xerada Xalane oo saldhiga ah ciidamada AMISOM iyo tababarayaasha milateri ee ka socda Midowga Yurub.
Ciidamadaas Taliyaaniha ah lama socon wax ka mid ah gaadiidka ciidamada Soomaaliya ama kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Dalalka Midowga Yurub ayaa inta badan sheega iney Soomaaliya ka joogaan tiro yar oo ciidamo tababaryaal ah, hase ahaatee waxaa haataan muuqata iney heystaan ciidamo gaar ah oo ay magaalada ka tegi karaan meeshii ay doonaan iyagoo aan u baahneyn Amisom ama ciidamada Soomaaliya.
Ciidamo cadaan ah ayaa horay loogu arkay meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo weliba la sheegay in markii Alshabaab laga saarayey degmada Qoryooley ay ciidamada AMISOM ka barbar dagaalamayeen ciidamada ka socda qaar ka mid ah dalalka Galbeedka.
RW Cumar oo xukuumadda cusub maanta horgeynaya baarlamanka Soomaaliya